Harry Potter short cut ​ကို ​ဘယ်​လို ​ဖျက်​မ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Harry Potter short cut ​ကို ​ဘယ်​လို ​ဖျက်​မ​လဲ
​ထက်​အ​နေ​နဲ့ ​တ​ခု​အ​ကူ​အ​ညီ​တောင်း​ချင်​လို့​ပါ… ​ထက်​တို့ ​စက်​မှာ.. virus ​ဝင်​နေ​တယ်​လို့​ထင်​လို​ပါ.. ​အ​ခု​ဖြစ်​နေ​ပုံ​က… Folder ​တစ်​ခု​ဖွင့်​လိုက်​တဲ့​အ​ခါ​အ​တိုင်း Folder ​ထဲ​မှာ.. ​အဲ​ဒီ Folder ​နာ​မည်​နဲ့ Folder Short Cut ​ရယ်… Microsoft ,New Floder, New Harry Potter and… ​ဆို​တဲ့ Folder short cut ​တွေ​ဝင်​ဝင်​နေ​ပါ​တယ်… ​အောက်​မှာ ​ပြ​ထား​တဲ့​ပုံ​စံ​အ​တိုင်း​လို့​ဖြစ်​နေ​ပါ​တယ်… ​အဲ​ဒီshort cut ​တွေ​ရှိ​တဲ့ folder ​တွေ​ဖွင့်​လိုက်​တိုင်း​ပါ.. Avira ..​က virus or unwanted ​ဆို​တဲ့ Message ​က ​အ​မြဲ​လို​လို​ပေါ်​လာ​ပါ​တယ်.. Remove ​လုပ်​လိုက်​တယ်​ဆို​ရင်​လည်း Microsoft, New Floder short cut ​က ​ပေါက်​သွား​ပြီး… New Harry potter and .. ​ဆို​တဲ့ files ​က ​ပျောက်​မ​သွား​ပဲ ​ဆက်​လက်​ရှိ​နေ​ပါ​တယ်..
​အ​ရင်​ဦး​ဆုံး ​အ​ခု​တင်​ပေး​လိုက်​တဲ့ program ​နဲ့ ​အ​ရင်​ဦး​ဆုံး ​ရှင်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ​ဦး . scan ​ဖတ်​ပြီး​လို့ ​အ​ကုန်​လုံး ​သေ​သွား​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​တာ​ပေါ့ . ​တစ်​ကယ်​လို့ ​မ​သေ​ဘူး​ဆို​ရင် manual ​သတ်​နည်း​ကို ​ဒီ​ပို့စ်​မှာ​ပဲ ​ဆက်​ပြီး​တော့ ​ရေး​ပေး​ပါ့​မယ် . manual ​သတ်​နည်း ​မ​ရေး​ပေး​ခင် ​ကျွန်​တော်​တင်​ပေး​တဲ့ Bkav Detect Shortcut File Virus ​ဆို​တဲ့ program ​လေး​ကို ​အ​ရင် ​သုံး​စေ​ချင်​ပါ​တယ် .
Download mediafire | zshare | ziddu | megaupload
GetData Recover My Files Professional v4.7
No Delete virus ​သတ်​နည်း
virus ​ကြောင့် disable ​ဖြစ်​သွား​သော Add/Remove ...
IObit Malware Fighter PRO 1.0.0.12
avira antivirus update ​ဘယ်​မှာ ​ဆွဲ​လဲ